Steam Deck dev-kits iri kufamba maererano neValve | Linux Vakapindwa muropa
Kuvhurwa kwe Valve Steam Deck zvakashamisa vazhinji. Iye zvino mugadziri anoramba achifamba kuti aunze akawanda dev-kits kana ekuvandudza kits. Nzira yekuita kuti hupenyu huve nyore kune vanogadzira zvemukati zvemuchina uyu uye zvisina kunangana zvinoita kuti chikuva chiwedzere kunakidza kune vashandisi.
Mune iyo Steam account meseji inogona kuverengerwa: «¡Zvese zvakarongedzwa uye yakagadzirira kune vanogadzira! Iyi ndeimwe yemabatch mashoma eSteam Deck Dev Kits inosunungura nhasi kune vadyidzani kuyedza mitambo yavo. Aya ekuongorora enjiniya anovaka anotibvumidza kubatanidza vanogadzira nemayuniti ayo anoshanda zvakafanana kune iwo achatumirwa kwauri.«
Uye meseji yakaenderera ichiti: «Sezvo isu tichiri mumatanho ekupedzisira ekuvandudza, chirongwa ichi dev-kit inotipa mukana wekutungamira vanogadzira mutambo kuburikidza nedanho rekutora yako mitambo paSteam Deck uku uchiramba uchiunganidza mhinduro dzako apo isu tichigadzirira kuvhurwa zviri pamutemo pakupera kwegore.«
Kune vatove nevamwe vagadziri vane yavo, uye ivo vanozokwanisa kutanga kuyedza mitambo yemavhidhiyo yavanogadzira pachigadzirwa chakafanana kune iyo iyo vamwe vashandisi vachakwanisa kutenga. vachamhanya mitambo yemavhidhiyo yakadaro. Izvi zvinovimbisa kuti zvese zvinoshanda sezvazvinofanira, uye zvinogadzirisa chero mabugs kana matambudziko emitambo mutambo usati watangwa wezita pane Steam.
Nhau huru kune wese munhu, uye izvo zvinobvumidza iyi Linux-based inotakurika koni kuti inakidze uye usapedze seSteam Machine, iyo kana uchirangarira, yakaguma yakundikana kupokana neXbox kana PlayStation, pakati pezvimwe zvinonyaradza zvakafukidza. Uye zvakare, iwo makiti ekuunganidza iyi "inoumbika" koni yakanga isina kudhura muzviitiko zvakawanda, izvo zvisina kubatsira mukusaita kwayo kubudirira uye zvese zvaizoitika mumashure ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam Deck dev-kits iri kufamba maererano neValve
Flutter 2.5 inouya nekuvandudza mashandiro uye nezvimwe
Ventoy 1.0.52 inosvika nehukuru hutsva hwe graphical interface yeLinux